कतारमा आप्रवासी घ’रेलु श्रमि’कमाथि यौ’न दुव्र्य’वहार र शो’षण – Sanjal Nepal
Homeसमाचारकतारमा आप्रवासी घ’रेलु श्रमि’कमाथि यौ’न दुव्र्य’वहार र शो’षण
कतारमा आप्रवासी घ’रेलु श्रमि’कमाथि यौ’न दुव्र्य’वहार र शो’षण
November 2, 2020 admin समाचार 5448
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको एउटा नयाँ प्रतिवेदनले अत्य’धिक कामको बो’झ, विश्रामको अ’भाव, दुव्र्य’वहार र अप’मान’जनक व्यव’हारका कारण कतारमा कार्यरत आप्रवासी घरे’लु श्रमि’कहरू वि’क्षिप्त हुने अवस्थामा ध’केलिएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
आवासीय घरे’लु श्रमि’कको रूपमा कतारमा कार्यरत १ सय ५ जना महिलाहरूसँग गरेको कुराकानीका आधारमा एम्नेष्टिले सो निश्कर्ष निकालेको हो । सो संस्थाले विज्ञप्ती जारी गर्दै कतार सरकारले श्रमि’कको अवस्था सुधार्ने उद्देश्यले प्रयासहरू गरेपनि अझै पनि उनीहरूको अधिकारको उ’ल्लंघन भइरहेको जनाएको छ । विज्ञप्तीमा केही महिलाहरूले त आफूहरू यौ’न दुव्र्य’वहार जस्तो ग’म्भीर अप’राधको शि’कार भएको समेत बताएको जनाइएको छ ।
सन् २०१७ मा कतारले घरे’लु श्रमि’क ऐन लागू गरेको थियो जसले काम गर्ने दैनिक समयसीमा तो’क्नुका साथै अनिवार्य दैनिक विश्राम, हप्ताको एक दिन विदा र तलवी विदाको व्यवस्था गरेको थियो । तीन वर्ष बितिसक्दा पनि एम्नेष्टीले सम्पर्क गरेका १ सय ५ जना मध्ये ९० जना महिलाले नियमित रूपमा प्रति दिन १४ घण्टा भन्दा धेरै काम गरेको जनाएका थिए । यसैगरी ८९ जनाले नियमित रूपमा हप्ताको सातै दिन काम गरेको र ८७ जनाले त उनीहरूको रोजगारदाताले आफ्नो राहदानीसमेत ज’फत गरे”को बताएको जनाइएको छ ।
कुराकानी गरिएका मध्ये आधाजसो महिलाले दै’निक १८ घ’ण्टा भन्दा धेरै काम गरेको र सबैले एक दिन पनि कहिल्यै विदा नपा’एको बताएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । केहीले उचित पारि’श्रमिक नपाएको र ४० जना महिलाले त आफूलाई अप’मान गरिएको, झा’पड हानिएको र थुकि’एको समेत जनाएको उल्लेख छ । एक महिलाले आफूलाई “कु’कुर सरह” व्यवहार गरेको बताएको एम्नेष्टिले उल्लेख गरेको छ ।
“सन् २०१७ मा ल्याइएको घरे’लु श्र’मिक ऐन कतारमा श्र’मिकअधिकार संरक्षणको सवालमा भएको एउटा अग्रगामी कदम थियो । तर ‘दु’खद् कुरा के छ भने हामीले कुरा गरेको महिलाका अनुभवहरूले यी सुधारहरूलाई ठीकसँग कार्यान्वयन वा लागू नग’रिएको स्पष्ट भएको छ” एम्नेष्टीका आर्थिक, सामाजिक न्याय शाखाका प्रमुख स्टिभ कक्बर्नले भनेका छन् ।
“घरे’लु श्र’मिकहरूले हामीलाई दिनको औसत १६ घण्टासम्म र हप्तैभरी काम गरेको सुनाए जुन कानुनले निर्धारण गरेको भन्दा धेरै हो । लगभग सबैको राहदानी रोजगारदाताले ज’फत गरेका थिए र अन्यले भने आफ्नो पारि’श्रमिक नपाएको र आफूलाई क्रु’र आ’क्रमण र अप’मानको शि’कार बनाइएको विवरण दिएका छन् । यो स’मग्र अवस्थाले क’तारमा रोजगार’दाताले घ’रेलु श्र’मिकलाई मानिस भन्दा व’स्तुको रूपमा व्यवहार गर्न पाउने प्रणाली विद्यमान रहेको चित्रण गर्दछ” विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
कतारमा लगभग १ लाख ७३ हजार घरेलु आ’प्रवासी श्रमि’कहरू छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अन्तर्वार्ता लिएका केही महिलाहरू अझै उनीहरूको काममा थिए । केही भने काम छा’डिसकेका भएपनि कतारमै बसिरहेका थिए र अन्य श्र’मिकहरू भने आफ्नो देश फर्किसकेका थिए । श्र’मिक महिलाहरूले विवरण दिएका रोजगारदाताहरू पनि विभिन्न देशबाट आएका थिए । पहिचानको गो’पनीयताका लागि सबैको नाम परिवर्तन गरिएको एम्नेष्टिले जनाएको छ ।
कतारले हालका वर्षहरूमा आ’प्रवासी श्र’मिकहरूको काम गर्ने अवस्था सुधा’रका लागि धेरै पहलहरू गरेको छ । घरे’लु श्रमि’क र उनीहरूका रोजगारदाताका लागि सचे’तना अभियान शुरू गरेको छ र घर बाहिर बस्ने घरे’लु श्रमि’कका लागि एउटा पाईलट कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
यसैगरी पछिल्लो समय कतारले न्यून’तम पारि”श्रमिक निर्धारण गरेको छ र काम परिवर्तन गर्न वा देश छोड्नका लागि रोजगारदाताको अनुमति पेश गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई अन्त्य गरेको छ । यी नयाँ कानुनी परिवर्तनहरूले श्र’मिकलाई शो’षणकारी रोजगारदाताहरूबाट उ’म्कन सजिलो बनाउन सक्ने भएतापनि सु’रक्षाको सुदृढीकरण र कानुन कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि अतिरिक्त उपायहरूबिना यिनले उल्लेखनीय रूपमा दुव्र्य’वहार नघ’ट्ला’ र घरे’लु श्र’मिकको अवस्थामा पनि सुधार न’आउला भन्ने एम्नेष्टिको ठ’हर छ ।
विज्ञप्तीमा घरे’लु श्रमि’कहरूले भो’गेका दुव्र्य’वहार मध्ये बिना वि’श्राम लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने कुरा सवैभन्दा धेरै देखिएको साझा स’मस्या रहेको उल्लेख छ । उनीहरूको क’रारपत्रअनुसार घरे’लु श्र’मिकहरूले धेरैमा १० घण्टा र हप्ताको ६ दिन मात्र काम गर्नु पर्ने र यो अन्तराष्ट्रिय श्र’म सङ्गठनले निर्धारण गरेको भन्दा पनि उ’च्च मापदण्ड हो । तर एम्नेष्टीले कुराकानी गरेका प्रायः महिलाहरूले यो भन्दा धेरै नै बढी समय काम गरिरहेका थिए र उनीहरूले दिनको औ’सत १६ घ’ण्टा काम गर्थे जुन हप्तामा १ सय १२ घण्टा हुन पुग्दछ । तर उनीहरूलाई अतिरिक्त समय काम गरेकोमा कुनै पारिश्रमिक नदि’इएको पा’ईएको एम्नेष्टिको ठ’हर छ ।
अन्तर्वार्ता गरिएका मध्ये कम्तीमा २३ जना महिलाले काम गर्दा आफूलाई पर्या’प्त खान न’दिएको र भो’कै रहनुपरेको बताएका थिए । कतिपयले को’चाको’च भरिएको कोठामा सुत्नुपरेको, केहीले त भु’ईंमा र एयर कन्डिसन नभएको कोठामा सुतेको पनि बताएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । यसैगरी कुराकानी गरिएका ४० जना महिलाहरूले आफूहरू शा’ब्दिक र शा’रीरिक दु’व्र्यव’हारमा परेको र प्रायले अ’पमानजनक व्यवहार, चि’च्याएर गरिएको गा’लिग’लौच र अन्य अप’मानहरू स’हनु परेको उल्लेख छ । देशपरदेश डटकम बाट
January 1, 2021 admin समाचार 2118
November 30, 2020 admin समाचार 4484
पत्रकार ऋषि धमला पत्नी अभिनेत्री मोडल एलिजा गौतमद्धारा हट फोटोशूट (१० तस्विर)
November 24, 2020 admin समाचार 2898
काठमाडौ । चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाकी जीवनसंगिनी एलिजा गौतम बेला बेला चर्चामा आइरहने पात्र हुन् । उनी अहिले नेपाली रंगमञ्चमा निक्कै जम्न कोसिस गरिरहेकी अभिनेत्री हुन् । दुनियाँ विपक्षी बनुन् त र म पत्रकार ऋषि
LEX 18 agenda conversation: Job club (541081)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (511604)
Hello world! (433279)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (395838)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (131031)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (103961)